7 Matipi Ekuvaka Yakabudirira Kukura Yekushambadzira Mashini Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 21, 2016 China, Gumiguru 20, 2016 Jon Corwin
Sezvo makambani anotarisa kuendesa mari nyowani mumatanho asina kuongororwa, matanho ekukura ari kuramba achiwedzera kufarirwa. Asi unotanga kupi? sei unotanga here? Ini ndinobvuma, zvinogona kutyisa.
Kutanga, ngatitaurei nezve nei zvirongwa zvekukura zviripo. Kana kambani iri kuyedza kuwedzera mari, vanogona kuzviita nenzira shoma: kuwedzera zvigadzirwa zvemumicheto, kugadzirisa huwandu hwepakati hweodha, kuwedzera kukosha kwehupenyu hwevatengi, nezvimwewo, makambani anogona kutsamira munzira nyowani yekuyedza kusiyanisa kwavo musanganiswa musanganiswa uye kutengesa kune vanhu vakawanda. Izvo zvinotisvitsa kuchikonzero nei mamwe makambani, senge Readers.com, ari kuisa mari mukukura kwekushambadzira kuti awane vamwe vatengi. Ipo kukura kwepfungwa kuchikwanisa kushandiswa kunzvimbo zhinji dzebhizimusi rako (wedzera kuziva, kuchengetedza, nezvimwewo), nechinangwa chechinyorwa chino ndinenge ndichireva chete kune vatengi kuwana kukura.
Yedu Yekukura Chikwata chakaumbwa pakutanga kwegore chave kuburikidza nekuyedza kukuru uye kukanganisa, yakasangana nekumwe kukunda kukuru uye zvisingadzivisike kukundikana kwakawanda. Kunyangwe iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchangoita zvishoma .
Unganidza kukura mazano kubva kumunhu WESE.
Madhipatimendi akasiyana anopa akasiyana maonero maererano nezvekuti mikana iriko. Zano rangu: yangu hunyanzvi. Nhengo yeEngineering Chikwata uye nhengo yeOpenimendi Chikwata ichapa akasiyana akasiyana maonero. Tora mukana weizvi.
Kwete chete kuti kuita kwakasiyana-siyana kwenhengo dzechikwata kunokupa iwe yakanaka yekutanga poindi, zvakare inokupa iwe mukana wekuruka iyo yekukura mindset uye kuyedza mukati mekambani yako DNA. Nepo Chikwata chako Chekukura chiri chako 'gwara rekukura', kana matanho ekukura aunoronga mukushandisa mukati menguva yakatarwa, munhu wese musangano anofanira kunzwa pfungwa yevaridzi muchiitiko ichi.
Onai kuti mune kodzero analytics uye data zvivakwa munzvimbo.
Usabhururuka uri bofu. Paunenge uchitanga chero kukura kwekutanga, iwe unofanirwa kuve neyakajeka tsananguro yekuti kubudirira kunoratidzika sei uye kuti uchafamba sei nekutevera. Kuva nezviridzwa zvakakodzera kuyera zvinobudirira chinangwa chako kwakakosha. Maitiro aunoshandisa kuona budiriro anofanirwa kubikwa muchikamu chekuronga uye zvitaurwe mune yakajairwa cadence. Yakasimba mhinduro malupu ndiyo yako hupenyu hweropa. Ipapo chete ndipo pauchakwanisa kudzidza kubva pamhedzisiro yemuedzo uye nekuvaka makuru uye ari nani matanho mune ramangwana. Zvakawanda nematanho akabudirira, analytics zvakare gonesa timu yako kunhonga nzwisiso uye kudzidza kutsva kubva kune zvisina kubudirira zviedzo futi.
Koshesa kukura kwemazano zvine hungwaru kuti utarise pakuburitsa kukosha kwakanyanya.
Kune zviuru zvevatengi zvekutenga nzira dzaunowana kwauri, tisingataure mikana mitsva ichikwira zuva rega rega. Semushambadzi wekukura, iwe unofanirwa kuona kuti sei iwe inogona kuendesa yakanyanya kukosha kukambani yako kuburikidza nemikana iyi. Muchidimbu, kudzidza kudzika uye kuisa pamberi mazano kwakakosha.
Shiny chinhu chirwere inogona kunge iri gomba rakajairika kune vashambadziri vekukura vachigara vachiuraya mikana mitsva. Usazviwire pasi pazvo. Panzvimbo iyoyo, gamuchira chimiro chekudzora ruzha uye kuunza nzira inodzokororwa uye inotyisa. Kune nzira dzinoverengeka dzakarongwa kunze uko nezve kuita kwekukura kwebasa, saka ita shuwa kuti timu yako inotora nguva yekutsvaga iyo inoshanda zvakanyanya kune iwe nharaunda yako.
Kuenzanisa ngozi nemubairo.
Kunyange isu tichizopedzisira tichikoshesa kuwedzera huwandu hwe 'pamabhati' atinotora (vhoriyamu, vhoriyamu, vhoriyamu!), Isu zvakare tinonzwisisa kuti haazi ese mikana akagadzirwa akaenzana. Imwe bheji hombe, iyo inowana traction inogona nyore kuridza gumi diki kukunda.
Isu tawana budiriro mukusanganisa mune mashoma makuru-swing njodzi needu madiki, mashoma ane njodzi kubhejera. Kutsanangura 'balance' kuchave kwakasarudzika kuchikwata chako, asi usanyara kusiyanisa hukuru hwenjodzi yaunowana neyese nzira. Mamwe maitiro anokweretesa zvakanaka kune chinokambaira, kufamba, kumhanya kusvika, nepo vamwe vangangoda yakawanda yeese-mukati maitiro.
Kukanganisa kudivi rekumhanya zvakanyanya.
Nguva chinhu chakakura chekubudirira, kunyangwe ichiwanzove sosi yekushomeka kwechikwata chako. Usatya kufamba nekukurumidza. Semuenzaniso, kumwe kuyedza kwekukura kune kutanga kufambisa mukana, zvinoreva kuti mikana inogona kufarira avo vanozvipira kune zano kutanga isati iri chiteshi chakamisikidzwa. Izvo zvakakosha kuti uzvipire pakutanga mune dzakadai nyaya, sezvo ichi chingave mutsauko pakati peiyo hombe ROI kana kushomeka kudzoka.
Ramba wakatendeka kuchako chako uye basa.
Iri zano rinogona kurira zvishoma, asi iwo mutemo wakanaka wechigunwe zvakadaro. Paunenge uchiyedza nzira dzekukura, zvibvunze kuti, "Kana zano iri riine kudzoka kwakanaka, tingaite isu muchirongwa chedu chenguva refu? ' Kana mhinduro iri kwete, enda mberi. Mazhinji matekiniki ekukura anogona kukumikidza nyore kukurumidza kuhwina asi zvakakosha kuti unzwisise kuti kupira iyo UX kana chiratidzo chechiratidzo, pachezvayo, mutengo wakavanzika. Zvimwe zvinhu zvinotaridzika zvakanaka pabepa asi kana zvikapesana nezviyo zvauri iwe sechiratidzo, hazvina kukodzera nguva, kudyara, kana kushanda nesimba.
Iva pachena nezvibereko uye kudzidza.
Hazvina mhosva kuti mhedzisiro yemiedzo ingave isina kujeka sei, ita shuwa kuti iwe unosimbisa iyo data pamwe nechikwata chako kuti vadzidze newe. Iko hakuna chikonzero muvanhu vazhinji vanoita chikanganiso chimwe chete nekuti nhengo dzeboka dzinozeza kushamwaridzana nekudzidza kwavo. Inobatsira munhu wese mukufamba kwenguva.
Hazvina mhosva kuti iwe waverenga zvakadii uye nekutsvaga kwekutanga matanho, iyo inokurumidza nzira yekudzidza kutanga kuyedza mazano ako. Usazviite mitezo usina chokwadi kana kutya kukundikana. Uchatadza. Bvuma. Dzidza pazviri. Uye wozozviita zvese zvakare. Ndiyo chete nzira yekukura.
Tags: kukuranzira dzekukurakushambadzira kukuravaverengikupenya chinhumazano
Jon Corwin ndiye Director weKukura Kushambadzira pa Readers.com. Semutungamiri wekukura mabasa ake anosanganisira kutsvagisa chiteshi nyowani uye kuyedza, kusimudzira kwekuwana vatengi, uye kudyidzana zvine hungwaru. Chinangwa chechikwata cheGrowth ndechekukurumidza kuona, kusimbisa, kuwedzera, uye kuyera migero mitsva yekubatsira kukurumidza kukura kweReaders.com. Iye ane shungu nezvekuvaka kunoedzwa kwekushambadzira fungidziro yekutyaira mhedzisiro kubva pakutanga kusvika pakuyera.
Tsvagiridzo: Email Rondedzero Yemhando yepamusoro Kukoshesa kweB2B Vatengesi